मास्क किन नलगाएको भनेर सोध्दा महिलाले दिएको यस्तो जवाफले प्रहरी चकित् , महिलाले मच्चाइन् ब’बाल (भिडियो हेर्नुहोस्) – SUDUR MEDIA
April 21, 2021 April 21, 2021 AdminLeaveaComment on मास्क किन नलगाएको भनेर सोध्दा महिलाले दिएको यस्तो जवाफले प्रहरी चकित् , महिलाले मच्चाइन् ब’बाल (भिडियो हेर्नुहोस्)
एजेन्सी । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर महामारीका रुपमा फैलिएको छ । दिनहुँ डेढ लाख भन्दा बढी मानिस सं’क्रमित भएका छन् । सयौंले ज्या’न गुमाएका छन् । कोरोना थप फैलन नदिन चोक चोकमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । दिल्लीमा क’र्फ्यु पनि लगाइएको छ । तर सर्वसाधारणले प्रहरीको आग्रह समेत वे’वास्ता गरेका छन् ।
हालै सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो भा’इरल भएको छ । जहाँ कारमा एक जोडी घुम्न निस्किएको देखिन्छ । उनीहरुले मा’क्स पनि लगाएका छैनन् । प्रहरीले उनीहरुलाई रोकेर माक्स किन नलगाएको भनेर प्रश्न गर्दा ति महिलाले बबाल मच्चाएको देखिन्छ । प्रहरीलाई तथानाम भन्दै उनले मुख छोडेकी छन् । कारमा मास्क नलगाई हिँडेको देखेपछि दरयानीगंज क्षेत्रमा प्रहरीले कार रोकेर ती जोडीलाई मास्क किन नलगाएको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
चर्को स्वरमा प्रतिक्रिया जनाउँदै कारमा सवार महिलाले प्रहरीले आफूहरुलाई का’रवाही गर्ने औकात नराखेको भन्दै त्यहाँ तैनाथ प्रहरीलाई ह प्का एकी थिइन् । ती महिलाले आफूले श्रीमानलाई चु म्ब न गर्दा पनि मास्क लगाउनुपर्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेपछि प्रहरी जवाफ विहिन भएको थियो । त्यती मात्र होइन उनी कारवाट निस्केर पाखुरा सु र्क दै प्रहरीलाई गा ली गरेको समेत भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
दिल्लीमा हरेक शनिबार र आइतबार क’र्फ्यू जारी गरिएको थियो । सोमबारदेखि भने एक हप्तासम्म लकडाउन नै घोषणा भएको छ। करफ्यूको नियम तो ड् दै ती जोडी बाहिर निस्किएका थिए । हाल दुवैलाई प’क्राउ गरेर हिरासतमा लिइएको छ । पुरुषको नाम पंकज हो भने महिलाको नाम आभा भएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छन् यी ३ राशिका बुहारी, मानिन्छन् लक्ष्मी समान…..ज्योतिष विज्ञानमा हामी नेपालीहरु जो कोहीले धेरै विश्वास विश्वास गर्छौ । हुन पनि हो, ज्योतिष विज्ञान भनेको हाम्रो मानव जीवनमा जोडिएको एक शास्त्र हो । ज्योतिष शास्त्रले भनेका र भविष्यवाणी गरेका कतिपयकुराहरू मिलिरहेका छन् । यस्तै मध्य एक राशि अनुसारको व्यवहारको पनि निकै चर्चा हुने गर्दछ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः कुरैले जित्ने चलाख हुन्छन् यी ५ राशि भएका ब्यक्ति ! हामी धर्म, ग्रन्थ देखि ज्योतिष विज्ञान सम्म निक्कै विश्वास गर्छौ । पृथ्वीको उत्पती देखि मानिसको जन्म, मृत्युका बारेमा ज्योतिष विज्ञानले बोलेको कुरा ब्रमाण्डका सबै मानिसले पत्याउदै आएका छन् । हामी कति बुद्धिमान या समझदार छौँ भन्ने कुरा हामी आफैँ बताउन सक्दैनौ । समझदारी या हाम्रो बुद्धि कौशलको अनुमान तब मानिसलाई थाहा हुन्छ, जब हामी कुनै विपत्तिमा आफ्नो दिमागको सही प्रयोग गर्छौँ ।
शनिवारको दिन कौसीमा घाम ताप्दै घरबेटी दीदीलाई मेरो नाम सबिन हो । म काठमाण्डुको पकनाजोलमा बस्छु । मेरो पेसा सैनिक भएकोले बिहान सबेरै अफिस जान्थे । एक दिन शनिबार नुहाएर कौशिमा बसिरहेको थिए, पल्लो घरको घरबेटी दिदी नुहाइरहेको देखे । त्यो दिदीको घर भन्दा म बसेको घर अग्लो भएकोले मैले सबै कुरा देख्ने अबसर पाए । त्यो दिदीको पोटिलो दू’धका फाँ’चा, टाईट थाई देखेर घुटुक्क थूक निले । तर त्यो दिन बोलचाल केहि पनि भएन ।अनि उनको पोटिलो ढूध र टाईट थाई सम्झदै दुईपटक छोलेँ । एकदम आनन्द आयो ।
अनि मैले पनि तेहि भएर अहिले बोलाएको नी दिदी भने । दुबै जना गफ गर्दै सोयम्भमा पुग्यौ र सँगसँगै पकनाजोलसम्म गफ गर्दै घरसम्म आयौँ । दिदीले सबै कुरा बाटोमा नै गर्नुभएको थियो बूढा र छोरो अमेरिका गएको रहेछ । दिदी तीन बर्षदेखि एक्लै बस्नुहुँदो रै’छ । चिया खान जाउ भनेर जिद्दी गरेपछि म पनि दिदीको घरमा नै गएँ । एकदम डेकोरेशन मिलाइएको घर अनि सजावट देखेर म पनि अचम्म परेँ । अनि दिदीले भन्नु भयो भाई टीभी हेर्दै गर्नु म चिया पकाएर ल्याउछु भनी किचनमा गई । मर्निङ वाकमा गएको ड्रेसमा झन से’क्सी देखिन्थी । मेरो सानो भाई एकदम उठिरहेको थियो ।
अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छन् यी ३ राशिका बुहारी, मानिन्छन् लक्ष्मी समान…..
आज मंगलबार घट्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो….